Izici zeMercury Thermometer, Ukusetshenziswa, Nezingozi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela kanye lapho wawusemncane, izinga lokushisa komzimba wakho likalwe lapho uke waba nomkhuhlane futhi basebenzise i- a I-thermometer ye-Mercury. Leli thuluzi lisetshenziswe kabanzi ukwenza okuncane ezintweni eziningi ngaphandle kokuthathwa ekushiseni komzimba. Njengoba lolu hlobo lwe-thermometer lwalunezingozi ezithile ekusetshenzisweni kwalo, banquma ukulufaka ngama-thermometer amasha edijithali.
Kulesi sihloko sizochaza kahle ukuthi isebenza kanjani, yanikezwa ini ukusetshenziswa nakho konke okuhlobene ne-thermometer ye-mercury.
2 Ukusetshenziswa kwe-thermometer ye-mercury
3 Izingozi nezingozi
Le nsimbi yokulinganisa izinga lokushisa yadalwa ngo-1714 ngu isazi sefilosofi nonjiniyela wasePoland ogama lakhe linguDaniel Gabriel Fahrenheit. Kulesi sibongo kuvela isilinganiso esisetshenzisiwe sesikali. Kamuva i-degree Celsius yethulwa njengesinye isikali esisha.
I-thermometer ye-mercury iqukethe isibani okusuka kuso ithubhu elincane lengilazi, futhi ngaphakathi okuyi-mercury yensimbi. Umthamo wale nsimbi ngaphakathi kweshubhu ungaphansi kwevolumu yesibani. Ithuluzi lalimakwe ngezinombolo ezazikhombisa izinga lokushisa kuya ngokuthi ilinganisa yiphi. Le nsimbi okukhulunywa ngayo yaqashwa ngoba tKulula ukushintsha ivolumu yayo kancane ngokuya ngezinga lokushisa.
Leli thuluzi lamaka ngaphambi nangemva kwesikhathi sesayensi. I-Thermology, okuyisayensi ehlola izinga lokushisa, ingenza inqubekela phambili enkulu kulokhu. Kucatshangwa kuze kube namuhla njengenye yezinto ezinhle kakhulu ezisunguliwe, yize ama-mercury thermometer engasasetshenziswa. Ububanzi bamazinga okushisa okwakungaba nawo babukhulu impela. Leli banga lokushisa linganwetshwa ngokufundiswa kwe-nitrogen noma enye igesi engena ngaphakathi. Lapho lokhu kwenziwa, kubangele ukwanda kwengcindezi kwi-mercury ewuketshezi futhi kwandisa indawo ebilayo.
Ukusetshenziswa kwe-thermometer ye-mercury
Manje sizohlaziya ukusetshenziswa obekukhona ngaphandle kokuthatha izinga lokushisa lomzimba uma kwenzeka kuba nemfiva noma ukungaphatheki kahle. Zazisetshenziswa emikhakheni ehlukahlukene. Ngokwesibonelo, kusenamakhaya anayo emnyango wangaphambili ukukala izinga lokushisa elikhona. Ezindaweni eziningi, njengezibhedlela nemitholampilo yokugula, besisetshenziswa ukukala izinga lokushisa kweziguli.
Ezinye izindawo kungaba amabhange egazi, kuhhavini, ama-incubator noma ukuhlolwa kwamakhemikhali. Ngakolunye uhlangothi, embonini i-thermometer iyasetshenziswa nasezitshalweni zokuphehla ugesi, ukwazi isimo samapayipi, okokufaka efrijini nokushisa, izindawo zokuphuza utshwala, okokugcina ukudla, imikhumbi, izindawo zokugcina izimpahla, amabhikawozi, njll.
Kuzo zonke izindawo, kubalulekile ukwazi inani lokushisa ukuze ukwazi ukukhiqiza imikhiqizo noma uqinisekise amaphethini athile asebenzayo. Ngokwesibonelo, kuyadingeka ukwazi izinga lokushisa lapho amanzi adlula khona ngepayipi embonini ukuze azi ukuthi kufanele apholiswe yini. Ngaphandle kwalokho, kungaba nezinkinga ezinkulu. Okufanayo ebhikawozi. Kufanele wazi inani lokushisa lapho isinkwa singenziwa khona ngokuphelele.
IMercury iyinto yemvelo ekhemistry efanekiselwa nguHg. Inombolo ye-athomu ingu-80. Ngaphakathi kokufakwa kwamalahle kungatholakala edwaleni lomhlaba njenge-mercury sulfide. Le nhlanganisela yaziwa nangokuthi yi-cinnabar.
IMercury ibilokhu ifunwa kakhulu iminyaka, ngoba ibibuye isebenziseke kakhulu ezintweni zezulu ezifana ne ama-barometers, izikali zokucindezela namanye amadivayisi njengokushintshwa, amalambu namanye amadivayisi. Le nsimbi nayo yasetshenziselwa ukwenza ama-amalgams wamazinyo.
Muva nje, izifundo ezimbalwa ziqinisekisile ukuthi ukusetshenziswa kwale nsimbi kwakungaphephile kubantu, ngakho-ke kukhishwe kancane kancane kanti ama-thermometer akhangiswa njengamanje yi-gallium.
IGIMA Ref. 25586 ...
I-thermometer yeGeratherm ...
I-APOSAN THERMOMETER NE...
Manje ake sibheke ukuthi yiziphi izingozi ezibandakanywa yile thermometer. E-European Union, sekutholakele ukuthi noma iyiphi insimbi equkethe i-mercury ayisakwazi ukumakethwa. Lokhu kungenxa yokuthi inobungozi obukhulu empilweni nasendaweni ezungezile, ikwazi ukungcolisa amanzi, inhlabathi nezilwane. ENyakatho Melika iphinde yasetshenziswa kwezinye izindawo.
Ingozi ye-mercury ilele emswakeni wayo. Kungumusi onobuthi ongaphefumula lapho kuphuka i-thermometer. Futhi, lapho i-mercury ichithekile kufanele iqoqwe ngokushesha ngaphambi kokuba kube neminye imiphumela emibi.
Uma ufuna ukwazi ukuthi i-thermometer oyisebenzisayo iqukethe i-mercury, kufanele nje uyibheke. Uma uketshezi olukulo lungeyona isiliva, kungaba utshwala noma olunye uketshezi olungenabo ubuthi futhi ayilethi noma iyiphi inkinga yezempilo noma ingozi. Esinye isici ukuthi kwilebula yomkhiqizo ithi "mercury free". Ngokomthetho, uzoqiniseka ukuthi ayikho imercury. Ngakolunye uhlangothi, kungenzeka ukuthi uketshezi luyisiliva futhi awukho umbhalo ongasho lutho ongenayo i-mercury. Uma lokhu kwenzeka, kungenzeka ukuthi kube yi-mercury.
Into yokuqala abantu abazibuza yona ukuthi benzeni uma ingilazi iqhekeka. Uma lokhu kwenzeka, awudingi ukusebenzisa umshini wokuhlanza noma umshanelo ukuwuhlanza. Akufanele futhi ukwenze ngezandla zakho noma ufake oketshezi phansi ethoyilethi noma kusinki. Ngaphandle kwalokho, ungangcolisa izinkulungwane zamalitha amanzi ngokungadingekile. Kuyinto engcolisa kakhulu engenza umonakalo omkhulu ngamanani amancane. Ukungaguquguquki kwale nto kusho ukuthi lapho iwela phansi ihlukana ibe ngamaconsi amancane bese inweba ngapha nangapha.
Lapho i-thermometer yehliswa futhi uketshezi luphuma, kungcono ukugcina izingane nezilwane ezifuywayo zikude nendawo bese uvula iwindi noma iminyango ukuze kungenise umoya endlini. Uma sisendaweni eyisicaba futhi ebushelelezi kuzoba lula ukuyihlanza. Kufanele usebenzise indwangu, amagilavu ​​kanye nemaskhi ukuyihlanza. Ungakhohlwa ukuhlola wonke amaconsi e-mercury enhlabathini kahle, ngoba kubaluleke kakhulu. Uma ushiya amaconsi ambalwa bese uthinta noma uhogela igesi enobuthi ingadala ubuthi, ukulimala kobuchopho, izinkinga zokugaya ukudla nezinkinga zezinso.
Ngiyethemba ukuthi ngalezi zeluleko ungafunda kabanzi nge-thermometer ye-mercury futhi uqaphele uma usayisebenzisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » I-thermometer ye-Mercury
Ngakho-ke, ngoba ukusetshenziswa kwe-amalgam yokubuyiselwa kwamazinyo kusavunyelwe, kuyaphikisana, ukuthi ukungcoliswa okuningi kune-mercury eyeqile emlonyeni!